isityalo esizenzekelayo seerayisi zemveliso yentengiso yefektri amaxabiso asezantsi azenzekelayo
1.Zenzekelayo izixhobo yokugaya irayisi:1500~ 2000kg / h
2.Umgca wemveliso oluzenzekelayo ngokupheleleyo,ubungakanani obuncinci kunye nesakhiwo esihambelanayo
3.Ukusetyenziswa kwamandla amancinci, ephezulu kakuhle
4.Igqityiwe irayisi akukho paddy
Iinkcukacha Product 40T / D oluzenzekelayo isityalo lokusila irayisi
Lo matshini wokuzenzela weerayisi ozenzekelayo uphuhliswa yinkampani yethu enokuthi ivelise irayisi ekumgangatho ophezulu, Indawo yokusebenzela yokuphela kweerayisi sisixhobo esifanelekileyo sokwenza ilayisi yeMigangatho I, Imigangatho II yemigangatho irayisi , ekhethekileyo kunye efanelekileyo yokucoca irayisi. Intsapho yezixhobo ezinesakhiwo esisebenzayo, ukusebenza kwenkqubo kuzinzile, inokuthenjwa kwaye ihlala ixesha elide, kulula ukuyifaka, ukusetyenziswa kwamandla okuphantsi, ukusebenza kunye nokugcinwa kulula kunye nokunye. Lo mzi-mveliso wokulima ozenzekelayo osisixhobo esifanelekileyo sisixhobo esifanelekileyo sokwenza izixhobo zokusebenza ngaphakathi kunye nesikhulu sokwenza irayisi kunye nenkampani yembewu isityalo selayisi kukhetho lwakho.
Amanqaku esityalo esizenzekelayo seerayisi
1.Isityalo sokugaya irayisi esizenzekelayo yinkqubo enceda ekususeni iigobho kunye neebran`s kwimbewu yeeddy ukuvelisa irayisi. ulungelelwaniso, ukusebenza ngokulula, indawo yokuhlala encinci, ukusetyenziswa kwamandla okuphantsi, Inkqubo emfutshane yokuvelisa, ukusebenza okuphezulu, ukunciphisa iindleko zokuphathwa kwengqolowa, Indawo yokusebenzela yokuphelisa irayisi luhlobo olupheleleyo lokusetyenziselwa irayisi yokudibanisa umatshini yerayisi.
2.Esi sityalo sombane esizenzekelayo sisebenza ngokuqhubekekayo sinokuqhubekeka siguqukele kwinqanaba lomgubo wesizwe nje kwinkqubo enye. Indawo yokutyala irayisi ye-automatci inokuvelisa irayisi ngokuqhubekayo. Kwaye ubungakanani bomatshini omnye kunye nesityalo sinokwenziwa senziwe ngokweemfuno zakho ezizodwa. Ke isityalo sokugaya irayisi esipheleleyo sesona sixhobo silungileyo sokulungiswa kwephedi yesitishi sokuhambisa ingqolowa, indawo yeentaba, Iifama kunye nabasebenzayo.
3.Esi sityalo sokugaya irayisi sidityaniswa nezinyusi zebhakethi, isicoci eshukumayo, de-samatye, husker, isahlukanisi se paddy,susa uthuli, iyasebenza kwaye iyathandeka,umgca wokugaya irayisi ogqibeleleyo kukusebenza kakuhle kokungacoceki kunye nokususwa kwamatye.
4.Isityalo esizenzekelayo sombila nerayisi siyinkimbinkimbi kwaye sisengqiqweni. Umgca wokugaya irayisi ozenzekelayo ulungele ukusebenza nokulondolozwa, ukugcina indawo yokusebenzela,Olu fakelo lunokuthi lusekwe kwiqonga lomsebenzi wentsimbi okanye ikhonkrithi ebekwe ngokhonkco ngokufunwa kwabathengi.
5.Irayisi umatshini we-sorter wombala kwaye umatshini wokupakisha irayisi uyazikhetha,singayithelekisa ngokweemfuno zakho ngexabiso lomzi-mveliso .
6.eli xabiso lesi sityalo esizenzekelayo seerayisi, kwaye iindleko eziphantsi kakhulu ezibonelelwa ngumzi-mveliso
Iinkcukacha zesityalo sokugaya irayisi esizenzekelayo
Amatshe ka-Paddy 1 iyunithi
Imingxunya yePaddy 1 iyunithi
Ukwahlulahlula amandla 1 iyunithi
Irayisi 3 iiyunithi
Isinyusi 6 iiyunithi
Ikhabhinethi yolawulo lombane 1 iyunithi
umthamo: 1.5 Iitoni ~ 2 iithoni / h
Irayisi yokuGaya iMbewu 700N40
Iziphumo :1500~ 2000kg / h
Hayi.&Into Imifanekiso Umzekelo Amandla
(kw) Qty Phawula
Isikhuseli sebhakethi DTG26 / 5 1.5 1 Intloko kunye nezantsi δ3.0, kumbhobho ophakathi delta 1.8, wokutyela paddy irayisi
Ilayisi yerayisi kunye nokucoceka I-TXC15 3+0.5+0.5 1 Ireyithi yokucoca i-Paddy
Isikhuseli sebhakethi DTG26 / 4.2 1.5 1 Intloko kunye nezantsi δ3.0, kumbindi wombhobho ophakathi 1.8, yokutyisa okucociweyo kwe paddy
Imingxunya yePaddy MLGT25 5.5 1 Ukulawulwa kokuguqula rhoqo,ye paddy irayisi hulling
Isikhuseli sebhakethi DTG26 / 4.2 1.5 1 Intloko kunye nezantsi δ3.0, kumbindi wombhobho ophakathi 1.8
Isahluli sokuhlukanisa I-MAC100 * 5 1.1 1 Ibakala le-GB, Uvavanyo lokuvavanya okunamandla okushukumisayo,ngerayisi egcadiweyo kunye nes sperating
Isikhuseli sebhakethi DTG26 / 4.2 1.5 1 Intloko kunye nezantsi δ3.0, kumbindi wombhobho ophakathi 1.8, yokondla irayisi ecocekileyo
Umatshini wokugaya iilayisi I-N150 18.5 1 Ukulungiselela ukugaya irayisi
Umatshini wedayisi wepayi N110 15 2 Ukulungiswa kweerayisi okucoliweyo
Isikhuseli sebhakethi DTG26 / 4.2 1.5 1 Intloko kunye nezantsi δ3.0, kumbindi wombhobho ophakathi 1.8, uphathe irayisi enamabele kumatshini wokuhlela irayisi
Umatshini wokulayisha iirayisi MMJP80 * 3 1.1 1 Kumgangatho omhlophe werayisi
nge 3 Ibakala
Isikhuseli sebhakethi DTG26 / 5 1.5 1 Intloko kunye nezantsi δ3.0, kumbhobho ophakathi delta 1.8, wokondla irayisi emhlophe
Umatshini wemibala yelayisi yelayisi 6XSM128 1.5 1 Ukuhlelwa kwemibala yelayisi
Inokukhetha irayisi etyheli okanye emnyama
Umatshini wokuzenzekelayo wephakheji DCS25 0.37
0.37 1 Ukupakisha iilayisi
Ukulinganisa irayisi ngokuzenzekelayo ,ukutywina kunye nokuhambisa
1~ 25kg / ibhegi
Amanye amalungu for yokugaya irayisi
Into Igama Umzekelo Amandla
/ Umhambisi wamandla / / / Ukulawulwa komgca wokulawula uphela
/ Izixhobo ezincedisayo / / / Isakhelo ,penda,intambo njl
Imali iyonke 17 IISET 73.49KW
Ufuna indawo: 10*8.5*5.5m
Ividiyo yesityalo esizizigayo seerayisi esizenzekelayo
Qhagamshelana nathi Kuba 40T / D oluzenzekelayo isityalo lokusila irayisi